UPENYU: Martin Vrijland
Zvinenge zvisingabviri kutenda kuti virusi yekaka inonyanya kutyisa hutano hwevanhu. Zvinyorwa zvepamusoro zvakare zvinoratidza zvakare kuti simba rekudzokorora rinoita kuti iwe uzvitende. Asi izvi zvinogona kunge zvakaputirwa nekangororo yekudzivirira yakaitwa muBrazil, umo vakadzi vane pamuviri kubvira muna 2015 [...]
Kushandisa zvinodhaka, CBD mafuta, psychosis uye kuora mwoyo
Akaiswa mukati HEALTH	by Martin Vrijland	musi we10 September 2015	• 11 Comments
Mushure mokunge nyaya dzose nezvekuputika kwevapoteri uye marudzi ose ezvimwe nyaya dzinoongorora, inguva yekuunza chimwe chinhu zvakare. Mushure mezvose, izvi ndezvenhau dzinongotitaurira matambudziko ari munyika uye zvirongwa zvisingabatsiri zveboka rinotonga. Nhau yandinokuunzira iko ikozvino [...]
Total Visits: 1.454.626